मुख्य समाचार – Kantipurlink.com
काठमाडौं । सरकारका १० सचिव, १४ सहसचिव र एक उपसचिवसहितको जम्बो टोली विदेश भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छ । कर्मचारीमा विदेश भ्रमणको मोह बढेको भन्दै आलोचना भइरहँदा एउटै कार्यक्रमका लागि उच्चस्तरको भ्रमण हुन लागेको हो । चीन सरकारको आमन्त्रणमा हुन लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव र सहसचिवहरू १२ देखि २५ सेप्टेम्बरसम्म चीन भ्रमणमा रहनेछन् । उनीहरू चीन सरकारको सार्वजनिक प्रशासनको अवलोकनका...	Read More
नेपाल आइडलबाट शुक्रबार किन भएनन् कोही पनि आउट ?
काठमाडौं । एपि वान टेलिभिजनबाट शुक्रबार प्रशारित सोमा कोही पनि प्रतिष्पर्धीहरु जजहरुका कारण आउट भएनन् । आज सबैभन्दा कम भोट आउनेलाई आउट गर्ने नियम तोड्दै आगामि हप्ता भन्दै छोडिएको छ । हिजोको सोमा सबै प्रतिष्पर्धीहरुको प्रस्तुति जोडदार भएको थियो । दर्शकहरुको तीव्र कौतुहलताको वेवास्ता गर्दै कौतुहलतामै शुक्रबार कसैलार्इ छनाैट नगरी छोडिएको छ । चार जनामा तीन जना छान्ने आजको सोमा...	Read More
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बिरुद्ध यस्ताे गम्भीर षडयन्त्र !
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले आफूबिरुद्ध अनलाइन मिडिया प्रयोग गरी गम्भीर राजनीतिक षडयन्त्र भएको आभास गरेका छन् । उनले हालै मात्र एक अनलाइन मिडियामा प्रसारित एक समाचारमा उनी ‘एमाले पार्टीमा प्रवेश गर्दैछन्’ भन्ने कुराको उल्लेख हुनुलाई आफूबिरुद्धको षडयन्त्रको रुपमा लिएका हुन् । यस सम्बन्धमा उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, “म एमाले पार्टीमा प्रबेश...	Read More
यि हुन् पशुपति शमशेरका सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरु
काठमाडौं । पशुपति शमशेर जबरा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम टुँगो लगाएको छ । संभवतः राप्रपा प्रजातान्त्रिक भोलि नै सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। राप्रपा प्रजातान्त्रिकका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने नेताको सूची तयार गरिसकेको छ । सरकारमा सहभागी हुनेबारे अध्यक्ष राणाले प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका...	Read More
काठमाडौं । नेपाल आइडलका सान भनेर चर्चित गायक निशान भट्टराईले बिहिवारको एपिसोडमा वान्स मोरका वान्स मोर पाएका छन् । कार्यक्रममा सधै दर्शकहरुले वान्स मोर गरेपनि बिहिवार भने निशानले फेरि पनि नगाई धरै पाएनन् । दर्शकहरुले वान्स मोर वान्स मोर गरिरहेपछि निर्णायाक मण्डलमा रहेका न्हु बज्रचार्यले निशानलाई वान्स मोर निशान भनेर पुनः गाउन लगाएका थिए । निशानलार्इ नै बिहिवार पनि यमाहा...	Read More
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उप-नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नो पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि चुनावी तालमेल गर्ने खुलासा गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा अायाेजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै रायमाझीले भने,‘हामी सबै दलसँग चुनावी तालमेल वा सहकार्य गर्न तयार छौं, यो विषयमा हामी छलफल गरेर एउटा टुँगोमा पुग्छौं।’ यद्धपी उनले चुनावी तालमेलको लागि सबैसँग खुल्ला छलफल गर्ने...	Read More
ब्यानर न्युज मुख्य समाचार Leaveacomment